Ny varavarankely misy rindrina, mifatotra na mifatotra ao amin'ny Windows 10 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Windows 10 dia misy fomba maro handaminana ny varavarankely misokatra ho azy, saingy somary miafina izy ireo ary na dia tsindry iray fotsiny aza eo amin'ny bara fiasa, raha tsy fantatsika dia mety tsy hiraharaha azy ireo mandrakizay koa isika.
Ohatra, rehefa mamindra ny varavarankely amin'ny sisiny dia azo atao ny manisy varavarankely amin'ny fizarana roa na efatra mihitsy aza ny efijery (amin'ny fisintomana ireo varavarankely mankany amin'ny zorony). Azonao atao ny manao toy izany amin'ny fipihana eo amin'ny habaka banga eo amin'ny bara fiasana miaraka amin'ny bokotra havanana ary ampiasao ny safidy Apetaho mifanila ireo varavarankely.
Mbola manindry ny bokotra havanana totozy dia afaka misafidy ny safidy asehoy ny varavarankely mifangaroharo, izay fomba iray hafa hametrahana azy ireo, fizarana mitovy ny efijery.
Amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry, dia azonao atao ny manindry ny bokotra Zana-tsipìka Windows + up hanitatra ny varavarankely iray, kitiho ny lakile Zana-tsipika Windows + down hamerina ny varavarankely amin'ny habeny kely indrindra ary hanindry indray ny bokotra Zana-tsipika Windows + down hampihena ny varavarankely. eo amin'ny tsoratry ny lahasa.
Miaraka amin'ny programa toa ny Powertoys ho an'ny Windows 10, azo atao ny mampandeha fiasa manokana fanampiny, toy ny famoronana lamina fikandrana manokana, amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny habe sy ny endrika isam-baravarankely misokatra.
Mbola afaka mahita atrioma marobe isika fika handaminana ny fikandrana amin'ny birao Windows.
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia mahita iray hafa tena ilaina, mora ampiasaina ary mahatonga ny biraon-trano tena ahazoana aina: ny fahafahan'ny cascading windows, hahafahanao manokatra hatrany amin'ny folo na mihoatra miparitaka eo amin'ny birao, mahita ny lohateniny hahafahanao maka sary an-tsaina azy ireo. miaraka daholo ary mifidy azy ireo haingana.
Ao amin'ny Windows 10 dia azonao atao ny manindry tsara eo amin'ny bara fiasa ary safidio ny safidy "Overlap ny varavarankely"hametahana azy ireo. Ny varavarankely rehetra izay tsy ahena dia haverina ao anaty fitoeran-diagonaly miampita, ny iray eo ambonin'ilay iray hafa, mitovy habe ny tsirairay. Ny bara lohateny isaky ny varavarankely dia haseho miharihary, manamora ny fanaovana azy tsindrio ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny cursor totozy ary ento ny varavarankely eo alohaloha. Azonao atao koa ny manindry ny kisary havana eo amin'ny bara fiasa mba hitondrana azy ireo any aloha.
Raha vantany vao noforonina ny riandrano, dia azo foanana izy io amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra totozy havanana indray eo amin'ny bara fiasa ary misafidy ny safidy "Esory ny varavarankely rehetra"Avy amin'ny menio. Hiverina amin'ny laoniny ny fandaminana ny fikandrana toy ny teo aloha izy io. Na izany aza, raha ny iray amin'ireo fikandrana mifanindry ihany no soloinao dia tsy azonao atao ny mamaha ny fandaminana ny cascade.
Mariho fa ny fikandrana fikandrana dia efa safidy ao amin'ny Windows 95, raha voafetra sy tsy misy vahaolana ny solosaina. Ity karazana fomba fijery ity dia mitovy amin'ny iray azo, hatramin'ny vao haingana, amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo bokotra Windows-Tab amin'ny fotoana iray ihany (anio ao amin'ny Windows 10 dia hisokatra ny fomba fiasa).